I-China i-60MM / i-2.4 ye-intshi ye-Magnetic Grinder Hexagon 4 isiqwenga seZintle ze-Zinc Alloy Spice Grice kunye neFektha | Umbhoxo
I-60MM / 2.4 Inch ye-Magnetic Grinder Hexagon 4 isiqwenga sePiece Zinc Alloy Spice Grinder
Uyilo olutsha lwensimbi eyingqangi-Ubungakanani obuncinci ubunzima besisindo i-hexagon 4 amagumbi onke aqhagamshelwe yimagnethi, kukwenze kube lula ukubeka i-herb ngaphakathi kwaye ukhuphe i-herb ngaphandle.
Umbala: Mpunga / Isilivere / Igolide yeRose
Ukhula Ubunzima: 323g
Ubungakanani (D * H): I-2.36 x 2.48 intshi (60 x 63mm)
Ubungakanani (Ububanzi be-x ukuphakama): I-2.36 x 2.48 intshi (60 x 63mm)
• Uyilo olutsha lwensimbi eyingqangi-Ubungakanani obuncinci ubunzima besisindo i-hexagon 4 amagumbi onke aqhagamshelwe yimagnethi, kukwenze kube lula ukubeka i-herb ngaphakathi kwaye ukhuphe i-herb ngaphandle.
• Lo msetyenzana weplatinam owakhiwe ukusuka kwisinyithi esiqinileyo nesomeleleyo se-zinc. Amagqabi wegriza ebukhali aqinisekisa ukuba ukugqobhoza nokugaya ngokufanelekileyo. Ubunzulu bamazinyo abukhali ngu-0,39 '' ukuze ukwazi ukoyisa ngakumbi imbiza kube kanye kwaye awuzukugubungela umda.
• Iigrayidi ezifanelekileyo zityhoboza ukugrumba zonke izityalo zakho ezomileyo zamagqabi. Umsebenzi onzima kunye nomthamo omkhulu wenza ukugoba komoya.
• I-grinders eyomileyo yemifuno kunye namagumbi ama-4, kulula ukwahlulahlula iziqwenga ezi-4 ngokukhawuleza kwaye ngenxa yokuba akukho zintambo kuya kuba lula ukuzigcina zicocekile.
• UMVUZO WEKHAYA-Iza nescreen esine-mesh kwaye sithathe kwaye sihluze i-herb entle kakhulu kwi-catcher enkulu.
• SEBENZISA IZIMBALI ZOKUGQIBELA KUPHELA- Ayifani nezinye izinto zokugalela ezigcina amancinci amasi kwaye ke oko kukwenza ukuba ugaye inani elincinci lamaxesha ahlukeneyo, isibonelelo sethu sizi-2.36 "ngokubanzi ngamagumbi anzulu abambe isithombo, okuthetha ukuba uza kukwazi gaya amanye amayeza ngaxeshanye.
• UMSEBENZI! I-premium grinder yethu kwisayizi efanelekileyo kuzo zombini izinto ephathekayo kunye nasekhaya. Ubunzima bumnandi kwaye bunzima, kodwa hayi kakhulu ukuba umthwalo uluthwala ujikeleze. ISIPHO SESIQINISEKISO! Ukuba awuyithengi ngokwakho okungenani uthenge enye kubahlobo bakho njengesipho.